Joomla template front page တွင်ကိုယ် တင်ထားသော session , category, article မပေါ်လို့ပ&#41 - MYSTERY ZILLION
Joomla template front page တွင်ကိုယ် တင်ထားသော session , category, article မပေါ်လို့ပ&#41
June 2010 edited June 2010 in PHP
joomla template ကို free download လုပ်ပြီး ကိုယ်. PC မှာ run တော့ စက်မပိတ်ခင်အကုန်လုံး အဆင်ပြေပြီး စက်ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်လိုက်တော့ front page မှာ title လေးပဲ ပေါ်ပြီး ကျန်တာ ဘာမှ မပေါ်တော့ လို့ပါ
ပြန်ပေါ်ချင်ရင် session , category, article ပြန်ပြီးတော့ publish လုပ်ပေးရပြန်တယ် မဟုတ်ရင် page က front page မှာ publish (pending) ဖြစ်နေပြီးတော့ ဘာမှ မပေါ်တော့ပါဘူး.... side bar မှာရှိတဲ့ menu
တွေလောက်ပဲ ပေါ်နေပါတယ် .....
OKay, တဆင့်ချင်း စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့။ ကျွန်တော်တော့ မဖြစ်ဘူးတော့ တိကျတဲ့ အဖြေတော့ မပေးနိုင်ဘူး။
1) template ကို install လုပ်မှ ဖြစ်တာလား တခြား error လားဆိုတာ အရင်သိဖို့လိုတယ်။ ဒါကြောင့် အရင် template ကိုပြန် on ပေးလိုက်ဗျာ။
2) Coding မပြင်ရင်တော့ ကောင်းနေပြီးသား core module တွေက အလုပ်မလုပ်စရာ အကြောင်းမရှိဘူးဗျ။ ကိုယ့်ထည့်လိုက်တဲ့ add-on တွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ Joomla မှာက template ရဲ့ module position တစ်ခုခုမှာ error တတ်ရင် ရှေ့ဆက် မ run တော့ဘူး။ ဒီတော့ add-on တွေကို disable ပြန်လုပ်ကြည့်ပါ။
3) error log ရှိရင်ဖတ်ပါ။ ဘယ်နေရာလဲသိနိုင်တယ်။
4) စက်မပိတ်ခင်ရတယ်ဆိုတာ cache ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
ခုတော့ ဒီလောက်ပဲ စဉ်းစားလို့ရတယ်ဗျာ။